ဝန်ဆောင်မှု - ကျော်ကြားသောသံမဏိအင်ဂျင်နီယာ Co. , Ltd
Prefab သံမဏိ structures များ
သံမဏိ Bailey တံတား
modular သံမဏိ Bridges
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသံမဏိ structures များ
hot မြှောင်စက် Rolls
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိသွန်းလောင်း (Metal သွန်းလောင်း)
multi Storey သံမဏိအဆောက်အ
အိမ်ခေါင်မိုးက Wall ကြမ်းပြင်စနစ်
မိုးမိုးကာကွယ်ပေးနိုင် panel က
EPS သားညှပ်ပေါင်မု panel က
ထိုနေ့ကိုပုသားညှပ်ပေါင်မု panel က
PIR သားညှပ်ပေါင်မု panel က
ဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေး panel က
အေး ROOM တွင် Panel ကို
ရေခဲသေတ္တာ & Chillers
flat Pack ကိုကွန်တိန်နာအိမ်
သံမဏိ modular အိမ်သူအိမ်သား
တံခါးပေါက် & Windows ကို
ခေါက်-up, Pack ကိုတံခါးများ
လှိမ့်ပုံ-up, Roll တံခါးများ
overhead Rolling shutter
ပုဒ်မ LIFT တံခါးပေါက်
Aluminun Glass ကိုတံခါးပေါက်
အဆိုပါကုမ္ပဏီထောက်ခံသူတွေကိုထောက်လှမ်းရေးအရည်ပျော်နှင့်အခွက်စာရင်းသွင်းရန်, လတ်ဆတ်တဲ့အခွက်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကုမ္ပဏီ join, ဒါကြောင့်အခွက်များစုစည်းနေခြင်းဟာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်လစာယန္တရား၏ရလဒ်အဖြစ် ပို. ပို. လေးနက်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 206 လုံးကိုအဆင့်ပညာရှင်များအပေါင်းတို့နှင့်မျိုးအင်ဂျင်နီယာနှင့် 60 ကျော်ရှိပါသည်ဘယ်သူကို၏ 1200 ကျော် empolyees ပြည်နယ်အဆင့်, ငါGradeⅡregisteredဖွဲ့စည်းပုံမှာအင်ဂျင်နီယာများ, လက်သမားတို့နှင့်ဗိသုကာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
သော့ကိုလယ်ပြင်၌ရှိသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများနားလည်သဘောပေါက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အဓိကယှဉ်ပြိုင်အဆင့်မြှင့်စောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ, ကုမ္ပဏီနည်းပညာ backup လုပ်ထားအင်အားစုအဖြစ်အကြီးတန်းကောလိပ်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာဒီဇိုင်းအဖွဲ့အစည်းများရှိပြီး Zhejaing ကဲ့သို့သောနည်းပညာသုတေသနဌာနနှင့်အတူကျယ်ပြန့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ R & D ကိုဆက်ဆံရေးထူထောင် တက္ကသိုလ်, Zhejaing Shuren တက္ကသိုလ်, အနောက်မြောက် Polytechnic တက္ကသိုလ်, etc ဤအတောအတွင်းကုမ္ပဏီသည် "ပြင်ပမှာသွား" ကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးအခွက်တဆယ်လေ့ကျင့်ရေးမဟာဗျူဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု mode ကို " ဖိတ်ခေါ်. " လေ့ကျင့်သင်ကြားထားပြီးအမျိုးမျိုးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ် technique ကိုကိုင်ပြီးကနေတဆင့်အစာရှောင်ခြင်းအဆင့်မြှင့်ဖို့န်ထမ်း '' ကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရန် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကနေလူသိများကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာဖလှယ်မှုပို့ချထို့ကြောင့်ရလဒ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် R & D, Self-ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုထူးချွန်အဖွဲ့ပိုကောင်းအောင်ထားရှိမည်သိရသည်။
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာကုန်ထုတ်လုပ်မှု honfeng စက်မှု Group မှ craftwork နှင့်နည်းပညာဦးဆောင်တိုးတက်မှုတွေပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံးစက်ကိရိယာများလျှောက်ထားသောကြီးမားသောသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းထူထောင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရရှိသော professionalized, ကြီးထွားလာ-အကြေး။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာလောကီသားတို့သည်ပထမဦးဆုံးနှုန်းကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများမိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံကုမ္ပဏီအိမ်မှာအများဆုံးအဆင့်မြင့်ကြောင်း H ကိုအမျိုးအစား, ပိုက်ဒိုင်းခွေဖွဲ့စည်းပုံ၏အားလုံးအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအတွက်အဆင့်မြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိုင်ဆိုင်, ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ boxbeam, C ကိုဖြတ်တောက် CNC ဟိုက်ဒရောလစ်လာကြတယ် posterior အမျိုးအစားသံမဏိ, Z ကို type ကိုသံမဏိထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, စတာတွေက hidden ခလုတ်ကိုအမျိုးအစား, ရာသီဥတုဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့်သတ္တုသားညှပ်ပေါင်မု panel ကထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ whipstitch ခေါင်မိုးဘုတ်အဖွဲ့ဒါကြောင့်အလင်းသံမဏိအမျိုးမျိုးသောအပြောင်းအလဲနဲ့တာဝန်များကိုပြီးမြောက်နိုင်, မိုးသည်းထန်စွာသံမဏိ, အာကာသဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိအစိတ်အပိုင်းထုတ်ကုန် အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အချိန်ပါ။ စီမံကိန်း၏ဆောက်လုပ်ရေး၏သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အလွန်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝယ်လိုအားနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းဖောက်သည်များ၏ဝယ်လိုအားအပေါ်အခြေခံပြီးသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာအပြောင်းအလဲနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
Chain ထောက်ပံ့ဖို့နာမည်ကြီး Add ရန်လိုပါသလား?
ခေါင်မိုး WALL ကြမ်းပြင် SYSTEM
တံခါးကို & WINDOWS တွေ
နေရပ်လိပ်စာ: Huafeng လမ်းမကြီး2#, Xiacheng ခရိုင်, ဟန်ကျိုးစီးတီး, Zhejiang တရုတ်နိုင်ငံ
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-571-87688170 (အလုပ်လုပ်အချိန်)
ကျနော်တို့ပွင့်လင်းနေသောခေါင်းစဉ်: MN-Fr: 8: 30 pm တွင်-6: 00 နာရီ
အေးအခန်းတံခါး, Roll-Up ကို Roll တံခါးပေါက် , multi Storey သံမဏိအဆောက်အ, တံခါးပေါက်ခေါက်-Up ကို , Frozen တံခါးဆွဲယူ , Pack ကိုတံခါးပေါက်-Up ကိုခေါက်,